SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiGuahibo ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKalanga (ChekuBotswana) ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTamil (Chinonyorwa Nearufabheti Yedu) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guambiano Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hamshen (Armenian) Hamshen (Cyrillic) Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabardin-Cherkess Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kekchi Khakass Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Pomeranian Poqomchi' Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Roman) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Ronga Runyankore Russian Samoan Sango Sateré-Mawé Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kana uchinyatsoziva zvauri, uchamira wakasimba pane zvaunotenda
Zvauri hazvingogumiri pakutaridzika kwaunoita. Zvinosanganisira zvaunokoshesa, zvaunotenda uye unhu hwako.
Kana uchiziva zvauri haubvumi kufurirwa nevezera rako; unoita zvinoenderana nezvaunotenda.
“Vanhu vakawanda vakaita sezvidhori zvemumashopu. Vanoita zvekusarudzirwa kuti vopfekei.”​—Adrian.
“Ini handinyari kuita zvinhu zvandinoziva kuti zvakanaka. Zvinoita munhu uye zvandinoita kana ndiinaye ndizvo zvinondibatsira kuziva kana iri shamwari yechokwadi.”​—Courtney.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Regai kuzvienzanisa nemamiriro ezvinhu epanguva ino, asi shandurwai nokuchinja pfungwa dzenyu.”​—VaRoma 12:2.
Funga kuti uri munhu akaita sei uye kuti unoda kuva munhu akaita sei. Unogona kuita izvi nekuongorora zvinhu zvaunogona, zvinokuomera uye zvaunotenda. Unogona kutanga nekupindura mibvunzo inotevera.
Zvaunogona: Ndezvipi zvipo zvandiinazvo? Ndezvipi zvandinogona? (Semuenzaniso: Ndinobata nguva here? Ndinozvidzora here? Ndinoshanda nesimba here? Ndine rupo here?) Ndezvipi zvakanaka zvandinoita?
ZANO: Zviri kukuomera here kufunga zvinhu zvakanaka zvawakamboita? Bvunza mubereki wako kana shamwari yaunovimba nayo kuti akuudze zvaunogona uye otaura kuti nei achiti unozvigona.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Munhu mumwe nomumwe ngaaratidze zvakaita basa rake oga, uye achabva ava nechikonzero chokupembera nomufaro pamusoro pebasa rake, asingazvienzanisi nomumwe munhu.”​—VaGaratiya 6:4.
Zvinokuomera: Unhu hupi hwandinofanira kugadzirisa? Ndepapi pandinonzwa ndichida kuita zvakaipa? Ndepapi pandinofanira kunyanya kuzvidzora?
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Kana tichitaura kuti: ‘Hatina chivi,’ tiri kuzvinyengera.”​—1 Johani 1:8.
Zvaunotenda: Ndeipi mitemo yandinotevedzera uye chii chinoita kuti ndiitevedzere? Ndinotenda kuti kuna Mwari here? Chii chinoita kuti ndibvume kuti ariko? Zvii zvandinofunga kuti hazvina kururama uye nei ndichifunga kudaro? Zvii zvandinotenda kuti zvichaitika mune ramangwana?
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Mano okufunga acharamba akakurinda, ungwaru huchakuchengetedza.”​—Zvirevo 2:11.
Kuziva zvaunokoshesa, zvaunogona, zvausingakwanisi, uye zvinangwa zvako kuchakubatsira kuita zvinhu zvakanaka paunenge wasangana nemiedzo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe 9: Zvauri